Abantu aba-10 abacebileyo eNew York | Ukuhamba kwe-Absolut
daniel | | ENew York
Kuyaziwa ukuba abanye babantu abazizityebi emhlabeni bahlala kulo EUnited States kwaye uninzi lwezi zigidigidi luhlala kwi-Big Apple. Namhlanje siza kuvavanya uluhlu lwe abantu abazizityebi abali-10 eNew York, apho siya kufumana ngaphezulu kwegama elinye elaziwayo.
Nangona kunjalo, kuluhlu uya kubona ukuba kukho ukungabikho okukhulu okunje ngezi Jeff Bezos, oyena mntu unemali eninzi eMhlabeni. Yena, njengabanye oosozigidi (UMark Zuckerberg, uBill Gates, uWarren Buffet, uElon Musk, njl.njl.) ukhethe indawo efihlakeleyo yokuhlala, kude nokukhanya koonondaba kunye nezakhiwo ezinkulu. Ucinge kakuhle, xa ubutyebi buninzi, unokuthatha isigqibo sokuhlala apho ufuna khona.
Ukunamathela ngokungqongqo kwisixeko sase ENew York, Uluhlu lubonakala ngoluhlobo. Ecaleni kwegama ngalinye sibhale inani elilinganayo nelifa labo elaziwayo, ngokweenkcukacha ezivela kwiphephancwadi Forbes yonyaka ka-2021:
1 # 1 uMichael Bloomberg
2 # 2 uCharles Koch
3 # 3 uLeonard Lauder
4 # 4 UJim Simons
5 # 5 uRupert Murdoch
6 # 6 uStephen Schwarzman
7 # 7 UDonald Newhouse
8 # 8 UCarl Icahn
9 # 9 uGeorge Soros
10 # 10 uLeon Mnyama
# 1 uMichael Bloomberg
Ubutyebi bakhe buqikelelwa kwi-59.000 yeebhiliyoni zeedola. Uthathwa njengomntu osisityebi wama-21 e-United States. Michael Bloomberg, owazalwa ngo-1942, ngumseki-ntsebenziswano, u-CEO kunye nomnini IBloomberg LP, Iinkonzo zemali ezidumileyo zehlabathi, isoftware kunye nemithombo yeendaba.
Ukongeza kwithamsanqa lakhe elimangalisayo, iBloomberg yaziwa ngokuba ibikhona Usodolophu waseNew York isithuba seminyaka elishumi elinambini, ndingomnye wamalungu ebhunga akweyona ofisi ixesha elide.
# 2 uCharles Koch
Kwiminyaka yakhe ye-86, UCharles Koch Ukuqokelela ubutyebi obungaphezulu kwe-46.000 yezigidi zeedola. Ininzi yale mali yayifunyenwe nguyise, uFred Koch, owaqala ishishini lentsapho kwiminyaka ye-40 emva kokutyalomali kwindlela ephuculweyo yokucoca ioli enzima.
Unyana wakhe uChase ubizwa ukuba alandele emkhondweni kayise kwinqanaba labashishini abanamandla Koch Industries.
# 3 uLeonard Lauder
Okwesithathu eqongeni kuluhlu lwabantu abazizityebi ezili-10 eNew York ULeonard Lauder, Iimpahla zazo ezixabisa ngaphezulu kwe-25.000 yezigidi zeedola. U-Lauder, oneminyaka engama-88 ubudala, uyi-New Yorker kunye nomongameli wecandelo lezorhwebo U-Estée Lauder.
Ukongeza ekubeni ngusozigidi, uLauder yingqokelela yobugcisa eyaziwayo. Iimpawu zakhe zegalari zabucala zisebenza nguPicasso, iBraque, kunye nabanye abazobi abakhulu.
# 4 UJim Simons
Ngexabiso eliqikelelweyo nge-24.000 yezigidigidi zeedola, UJim Simons Okwangoku ungumntu wesine ocebile kakhulu eNew York. Nangona kunjalo, ungumlingiswa omncinci owaziwayo kuba uzama ukunqanda imithombo yeendaba kunye nodumo, ukhetha ukungabonakali.
Owona mthombo wobutyebi bakhe yinkampani IiTekhnoloji zeRenaissance, inkampani ehloniphekileyo yokurhweba ngemali yokuthengisa eyayisungula neqela labalingani ngo-1982.
# 5 uRupert Murdoch
Ngubani ongayazi imogul enkulu yemidiya Rupert Murdoch? Lo wase-Australia, obehlala eNew York amashumi eminyaka, uqhuba iqela elinamandla leendaba elibandakanya iinkampani ezibalaseleyo njenge Fox News, Ixesha leLondon y The Wall Street Journal.
Impahla yosapho lakwaMurdoch ixabisa malunga ne- $ 24.000 yezigidigidi.
# 6 uStephen Schwarzman
Lo krebe wemali uzuze indawo yakhe kuLuhlu lwabantu abaTyebileyo baseNew York abali-10 ngokubulela kutyalo-mali lwakhe olunenkalipho kwiimarike.
UStephen schwarzman ngumongameli kunye ne-CEO ye IQela leBlackstone, yenye yezona ndawo zibaluleke kakhulu kumashishini abucala alinganayo kwihlabathi liphela, enepotifoliyo yotyalo mali engaphezulu kwe-540.000 yezigidi zeedola.
# 7 UDonald Newhouse
Ungumnini Phambi koshicileloInkampani epapasha eyasungulwa nguyise ngo-1922. Phakathi kwezona zihloko ziphambili zale nkampani zezi Vogue, into evanithi ngokuthambile y INew Yorker, ukongeza kumaphephandaba amaninzi asekuhlaleni nakwimimandla eMelika.
Ixabiso likaDonald Newhouse oneminyaka engama-92 lixabisa malunga ne-18.000 yezigidigidi zeedola.
# 8 UCarl Icahn
Ubutyebi be-16.000 yezigidi zeedola ekufuneka zenziwe UCarl Icahn ivela kwimisebenzi eyahlukeneyo yezoqoqosho. Owayesakuba liqabane kunye nomcebisi kuDonald Trump ngumseki kunye nesininzi sabelo zabelo Amashishini eIcahn, indibaniselwano yeenkampani ezibandakanya amacandelo ahlukeneyo anjengeearonautics, izindlu nomhlaba kunye nezithuthi, phakathi kwabanye.
# 9 uGeorge Soros
Igama lakhe lisemilebeni yabalandeli abaninzi beyelenqe. george Soros, owazalelwa eBudapest (eHungary) ngo-1930, ngumongameli Ulawulo lweNgxowa yeSoros y IziMiselo zoMbutho ovulekileyo.
I-Soros iqulethe umzekelo ogqibeleleyo wendoda eyenziwe ngumntu owafudukela eUnited States eneminyaka eyi-17 kwaye, ngokusekwe emsebenzini, abafowunelwa abalungileyo kunye nenhlanhla, wayesazi ukwakha ubutyebi obukhulu, obuxabisa phantse i-9.000 yezigidi zeerandi .
# 10 uLeon Mnyama
Siyavala uluhlu lwabantu abazizityebi abali-10 eNew York ULeon Black, Umseki-mbumba, umongameli kunye ne-CEO yenkampani yabucala equity Ulawulo lwe-Apollo Global.
Ngobutyebi bobuqu obungaphezulu kwe-6.000 yezigidigidi zeedola, uMnyama ukwalilungu leBhunga lezoBudlelwane baNgaphandle kunye noMongameli weMyuziyam yoBugcisa baManje eNew York.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Abantu abazizityebi ezili-10 eNew York
I-mastic resin, eyinzalelwane yaseChios